Otu esi emeso ndị na-ekwu okwu n'ihu ọha | Martech Zone
Otu esi emeso ndị na-ekwu okwu n’ihu ọha okwu
Wednesday, October 10, 2018 Wednesday, October 10, 2018 Douglas Karr
Nke a bụ ọkwa m kwesịrị ide ihe karịrị otu afọ gara aga, mana a kpaliri m ide ya n'abalị a mgbe ihe omume m kwuru na ya. N'afọ gara aga, agara m Rapid City, South Dakota ma kwuo okwu na Echiche Otu, ihe omuma ahia mbu nke Korena Keys, onye oru ahia mpaghara, onye nwe ụlọ ọrụ, na mpako South Dakotan. Ebumnuche Korena bụ ịkpọbata ndị ọkà okwu si na steeti nke nwere ike ịhapụ echiche azụmaahịa South Dakota ka ha wee nwee ike ịnabata usoro dijitalụ na usoro ịre ahịa.
Mgbe m rutere na Rapid City afọ gara aga, Korena kpọlitere m n’ọdụ ụgbọ elu n’onwe m. Agara m n'otu ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ dị na mpaghara, akụkọ ihe mere eme, mgbe ahụ Korena kpọpụrụ ndị ọkà okwu niile gaa ịgagharị ụfọdụ ụlọ mmanya. N'echi ya, anyị gara njem ọkachamara na mpaghara Black Hills, ogige anụ ọhịa bea, Mount Rushmore, na mgbede na Deadwood. Ile ọbịa were m ọkụ nke ukwuu nke na m gwara Korena na achọrọ m ịlaghachi. Korena jiri amara weghachi m n'afọ a, na Sioux Falls. Ọgwụgwọ ahụ adịghị iche - njegharị akụkọ ihe mere eme nke mpaghara na ụfọdụ ncheta dị ịtụnanya. Nke ahụ bụ foto anyị na Falls na Sioux City.
Oge niile m nọ na South Dakota na njem abụọ ahụ, ana m akọrọ onye ọ bụla ihe ncheta na ntanetị. Amabeghị m etu etu mpaghara ahụ si dị ịtụnanya na m laghachitala otu mgbe ma na-eme atụmatụ ịlaghachi n'oge na-adịghị anya maka ezumike ogologo oge ebe ahụ (Sioux Falls nwere ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na-ekpuchi obodo ahụ).
Ihe ederede a abụghị maka imebi ndị ọkà okwu gị (ọ bụ ezie na anaghị m eme mkpesa na m ga-emebi). N'ikwu okwu na ọtụtụ narị ihe omume, enwetụbeghị m mmasị karịa ka m nwere na njikọ ndị a… na nke a bụ ụfọdụ echiche:
Enwetụbeghị m oge dị ukwuu na-akwadebe ihe ngosi na okwu ihu ọha karịa ka m nwere maka mmemme afọ a. Achọrọ m ịgafe ihe na-efu na akụrụngwa ndị otu Korena mefuru na m na-eme njem ma na-ekwu okwu na mmemme ha. Amaghị m na nke ahụ ga-ekwe omume, mana m gbalịrị!
Enwetụbeghị m oge dị ukwuu na-akwalite ihe omume m na-ekwu. N'agbanyeghị na anaghị ebi ma ọ bụ na-arụ ọrụ na South Dakota, agbasiri m ike ka m nwee ike ịnwale inye aka tiketi tiketi na ịbịaru ụlọ ọrụ mpaghara ha na ihe omume ahụ.
The njem na ile ọbịa ileta na South Dakota kwesịrị ịma ihe onye nnọchi anya na-enweghị atụ nke South Dakota na Korena bụ. Korena nwere mmetụta sitere na Boulder, Colorado ruo Tampa, Florida na ebe ọ bụla dị n'etiti nke ahụ kesara ọtụtụ ndị ahụmahụ ha n'ịntanetị na ndị na-ege ha ntị. Enweghi m ndị enyi na-erughị iri na abụọ ndị nyere m aka ma gwa m na ha na-eme atụmatụ ịga leta mpaghara ahụ mgbe m hụrụ ụdị njem ndị a masịrị m.
Ọ bụ ezie na ihe ndị a niile dị egwu, echere m na ọ niile gbadara n'otu ihe… Korena mesoro anyị mmekọ kama ọ bụ naanị ọkà okwu. Ọtụtụ mgbe, a na-akpọ m ka m kwuo okwu na emume ma mee ka m chee na ndị mmadụ na-emere m amara site n'inye m ndị na-ege ntị. Ha anaghị eche maka afọ ikwu okwu na izu nke ọrụ a na-ekwu okwu na mmemme ha ma ọ bụ nsogbu ịhapụ azụmahịa m na ezinụlọ m ụbọchị ole na ole. Chọpụta, mgbe ụfọdụ, a ọkà okwu nri abalị ma ọ bụ a na-emeso na-eche na nkwari akụ ụlọ room ma ọ bụ nnọọ obere iji nweta ihe ọ bụla ọzọ.
Ebe m gara ma kwuo okwu n'ọtụtụ emume, enwere m nghọta ụfọdụ banyere otu ụlọ ọrụ si ahazi ma kwalite mmemme. Afọ ndị gara aga, etinyere m aka na mmemme nchịkọta mba ụwa na otu ahụ nyere m onye inyeaka na ebe nzuzo iji gbaa ndị na-akwado ha ajụjụ maka blọgụ m. Ndị otu Korena nabatara na afọ a ma nwee ike idekọ pọdkastị na otu n'ime ndị ọkà okwu ahụ.
Agakwara m NKWUKWU na Toronto afọ a, ihe omume nke Uberflip mana na-agba ọsọ site na ụlọ ọrụ Jay Baer, Kwenye ma gbanwee. Ihe omume ahụ na-aga n'ihu na-eto eto ma bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma m gara. Ekwetaghị m na ọ bụ ihe ndabara na otu n'ime ndị ọkà okwu kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ enyerela aka ịmepụta otu n'ime ihe kacha mma na ụlọ ọrụ ahụ. Echere m na ndị otu Jay were ihe niile mụtara site na ọtụtụ puku okwu na narị otu narị ihe omume - wee kechie ya n'ihe omume na-akụtu ya n'ogige ahụ. Mgbe mụ na Jay kparịtara ụka mgbe a gbara ajụjụ ọnụ na nso nso a, echere m na m hụrụ otu ohere wee gwa ya maka ya. Nzaghachi ya dị ịtụnanya - ọ nọ na-arụ ọrụ zuru oke ma jụọ ajụjụ ole na ole. Enwere m mmasị na ọ na-ege ndị na-ege ya ntị ntị.
Otú Not Ga-esi Na-emeso Ọkà Okwu Gị
Ọsọ ọsọ gaa ohere ikwu okwu ọhụụ m. Ntughari maka ihe omume a adighi nma ma na akuko banyere ikwu okwu ebe ahu bu ihe siri ike - site na ogbo, teknụzụ na-akwado ya, na usoro a. Adịghị m ka m kụrụ homerun na okwu m, yabụ, ewepụrụ m onye nhazi ahụ mgbe ihe omume ahụ gasịrị ma kwuo ụfọdụ ndụmọdụ banyere etu onye na-ekwu okwu si nwee ahụmịhe. ike ka mma. Nzaghachi a dị ntakịrị shocking ọ gwara m na m nwere ike ịga ọsọ nke m n'ụzọ ahụ ma ọ bụrụ na m chọrọ.
Anaghị m agwa onye nhazi otú ha mere kwesịrị na-eme ihe omume ahụ, enwetara m ahụmịhe zuru oke mgbe m kwusịrị afọ ndị a niile ihe nwere ike ime ka ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ nweghị mmetụta dịka o nwere ike bụrụ na ọ nweghị uru dị ka ọ nwere ike, gịnị ma ị gere ndị na-ekwu gị ntị ntị ka ha nwee nghọta na echiche banyere ihe ị ga-anwale n'ọdịnihu?
Ndị na-ekwu okwu bụ ndị mmekọ gị
Ọ bụrụ na ị na-ego m ka m kwuo okwu na mmemme gị, ọ bụ maka ọdịmma m ka ọ bụghị naanị ime nnukwu ọrụ na-ekwu okwu… ọ bụ maka ọdịmma m kachasị mma iji kwalite mmemme gị tupu, n'oge na mgbe emechara. Ọ bụ maka ọdịmma m kachasị mma iji meziwanye ahụmịhe mmemme gị n'agbanyeghị enwere m ike. Ọ bụ maka ọdịmma m kachasị mma iji nyere gị aka ịmewanye mmemme gị ka ị nwee ike ibute m. Enwere m ekele na m ji ụlọ ọrụ ndị na-ewe m n'ọrụ ụgwọ. Na-emeso m dị ka onye ọlụlụ na m ga-enye gị ihe niile m nwere iji melite mmemme gị. Na-emeso m ka ihe nzuzu ma esi m ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ka mụ na gị nwee mmekọrịta gị na mmemme ọzọ gị, hụ na ị kpọtụrụ m site na DK New Media ma ọ bụ nkata bot ebe a na saịtị m.
Tags: echiche otundakọrịtaomumeJay Baerkeynoteigodo korenaogbako ahiaMgbakọ Ahịaokwu ihu ọhaobodo ngwa ngwasioux daraọkà okwuọkà okwutoronto
Douglas Karr Wednesday, October 10, 2018 Wednesday, October 10, 2018
Ebumnuche Azụmaahịa Nchịkọta 6 dị ala maka obere azụmaahịa
Maa amụma? Vetikal Vertical abụghị naanị Mainstream, ọ na-arụ ọrụ karịa